एक औद्योगिक उपकरण के छ? प्राविधिक उपकरण र सूची
एक उत्पादन गुणस्तर धेरै हदसम्म यसको उत्पादन को माध्यम द्वारा निर्धारण गरिन्छ। को ईन्जिनियरिङ् क्षेत्र मा मिसिन उपकरण र सम्बन्धित उपकरण, सीधा उपचार प्रक्रिया, माल को विधानसभा र अधिग्रहण संलग्न जो महत्वपूर्ण प्राविधिक विशेषताहरु छन्। तर पनि एक महत्वपूर्ण भूमिका, परिणाम को गुणवत्ता को मामला मा, प्ले टूलींग, यसको मुख्य उत्पादन एकाइहरु लागि सामान को एक सम्पूर्ण दायरा छ।
टूलींग मा सामान्य जानकारी
औद्योगिक उपकरण को श्रेणी मा एक स्वतन्त्र उपकरण, र निर्मित घटक, उत्पादन प्रक्रिया को समारोह प्रतिबिम्बित छ जो रूपमा समावेश छ। व्यक्तिगत एकाइहरु सन्दर्भमा, तिनीहरू पनि अप्रत्यक्ष लाइन को विशेषताहरु गर्न, सीधा आफ्नो क्षमता संग सम्पर्क बिना योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कार्य प्राविधिक उपकरण बाहिर वा औद्योगिक जटिल रूपमा जुन विचार गर्न आवश्यक छ। यसको मुख्य उद्देश्य उत्पादनहरु को मानक गुणवत्ता, उत्पादन मात्रा वृद्धि, न्यूनीकरण र श्रम सेवा कर्मियों चमकती, र यति मा। डी कायम गर्न उपकरण, मिसिन उपकरण को प्राविधिक सम्भावनाहरू को विस्तार को तत्व को मद्दतले प्रिपेरेटरी सञ्चालनका अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यी लक्ष्य हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, प्रशोधन समय कम छन् खाली र उत्पादन प्रक्रिया अन्य सुधार को खर्च मा।
उपकरण को प्रकार
टूलींग को आधारभूत विभाजन गन्तव्य आधारमा गरे। विशेष, त्यहाँ नियन्त्रण, विधानसभा, मिसिन उपकरण, फास्टनरों र सार्दा सदस्य को हार्डवेयर उपकरण हो। नियन्त्रण केसिङ स्तर अनुपालन मा निर्मित लेखापरीक्षण उत्पादन को चरण मा एक सहायक घटक रूपमा सेवा गर्दैछन्। Jigs एक एकात्मक संरचना, वा जटिल उपकरण मा दक्षता लेआउट समाप्त तत्व वृद्धि। जस्तै, बल, लगाउने प्रतिरोध वा असर को स्थायित्व - तथापि, सबै भन्दा साधारण stanochnaja टूलींग, उपस्थिति जो को discharged उत्पादन केही विशेषताहरु को स्थापना असर गर्छ। थप फास्टनरों, बारी मा, उत्पादन साइट भित्र उपचार वा आन्दोलन समयमा नै खाली को fixation प्रविधी सुधार गर्छ। तदनुसार, यो टूलींग उपस्कर पूर्वाधार उत्प्रेरित गर्छ र एउटै वाहक लाइन साथ उत्पादनहरु को आन्दोलन को स्थिरता र शुद्धता लागि जिम्मेवार छ, जो एक तत्व हो।
पहिलो तस्वीर समारोह मार्गदर्शन ह्यान्डलिङ लागि प्राविधिक हालतमा गर्न मुख्य रूप तोकिएको। त्यसपछि थप कुशल र उत्पादक यंत्रीकृत समकक्षों आए। प्रक्रियाहरू को विकास को वर्तमान चरण मा झन् endowed स्वचालन कार्य स्न्याप। यो ड्राइभ स्वचालन स्रोत नियन्त्रण र यसको मुख्य एकाइहरूको नै सिद्धान्त मा, आधारभूत उपकरण छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। एउटै टूलींग मा एक संयुक्त मोडेल मा संचालित, र अर्ध-स्वचालित मोडमा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा, एक आंशिक यंत्रीकृत नियन्त्रण सिद्धान्त realizable। यो उद्देश्य, हाइड्रोलिक वा वायवीय actuators लागि। एउटा तरिका वा अर्को, तर लगभग सबै आधुनिक कम्पनीहरु सक्रिय सार्दा वा स्वचालित नियन्त्रण अवधारणा प्रयोग गर्न पहिले नै सरेको छ।
उत्पादन टूलींग डिजाइन
प्रदर्शन को एक विशेष प्रकार को उत्पादन को लागि एक प्राविधिक डिजाइन समाधान विकास प्रक्रिया धेरै कदम समावेश छ। पहिलो चरणको निर्धारण गरिन्छ र स्पेक्ट्रम जिम्मेवारी तत्व कार्यहरु मा, जो पछि यसको विशेषताहरु विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रियामा एकीकरण को मामला मा हिसाब गरिन्छ। यहाँ त्यहाँ जो एक विशेष घटक उत्पादन मानक हो, तर निर्मित उपकरण को विभिन्न अक्सर आवश्यक गुणस्तर उपकरण अनुपम विकास बनाउँछ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। मुख्य चरण डिजाइन मा अनुसार लक्षित सञ्चालन प्रक्रिया को प्रकृति संग उत्पादन टूलींग विनिर्माण र विधानसभा सर्किट तत्व सिर्जना पनि समावेश छ। एकै समयमा यन्त्र निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जो सामाग्री आवश्यकताहरु, गर्न विशेषज्ञहरु को एक सेट फारम। यस मामला मा, डिजाइनर उपकरण को सञ्चालन अवस्था र यसको तत्काल कार्यहरू को विशेष ध्यान गर्नुपर्छ।
सामान्यतया, तस्वीर तत्वहरूका लागि प्रक्रिया उत्पादन विशेष उपभेदों र कास्टिङ प्रकारका, सिरियल उत्पादन अनुमति जो प्रयोग आधारित छ। फेरि, गैर-मानक उपकरणहरू सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत डिजाइन र परियोजना परिभाषित विशिष्ट मापदण्डहरु को धेरै फारम काम गर्न। निस्सन्देह, प्राविधिक उपकरण को आकार दिन त्यहाँ अन्त गर्दैन। अर्को आवश्यक सञ्चालन अवस्था गर्न preform ल्याउन अनुमति दिने, खोल्दै र गर्मी उपचार, मिलिंग को कदम पालना हुन सक्छ।
धेरै कारोबार संलग्न उपकरण को यस प्रकार को रूसी निर्माता। उदाहरणका लागि, Yaroslavl मा एक टूलींग कारखाना (YAZTO) मर्छ आकार दिन र अलग, जो ठूलो आकारको उत्पादनहरु सहित बनाउँछ, संयुक्त को उत्पादन मा लगी भएको छ। यो दिशा मा पनि यो काम गर्दछ मास्को कम्पनी "Elton", बेल्गोरड उद्यम "ताल" र धेरै अन्य काम, एक वा तरिका मेटल जोडिएको अर्को।
अक्सर, उपकरण निर्माण क्षमता को कार्यान्वयन मा काम एक महत्वपूर्ण रकम खर्च। र उच्च गुणस्तरीय औद्योगिक उपकरण स्वचालन तत्व संग नै गरेर बोट मा सबै उपकरण लागत लगभग आधा हुन सक्छ। तर अभ्यास एड्स को चतुर उपयोग पूर्णतया जायज छ भनेर देखाउँछ। यसबाहेक, आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग पैतृक उपकरण संग बिरुवाहरु मा उत्पादन गुणस्तर सुधार गर्न मात्र तरिका हो।
घर्षण धूलो के हो?
धडाका रकेट इन्जिन: सञ्चालन सिद्धान्त परीक्षण, लाभ
उद्यमी कारोबार मा वितरण लागत
अत्यधिक डामर बांधन परिमार्जन र कोटिंग thicknesses घट्यो।
एल्यूमीनियम मिश्र: गुण र Metalworking
कार्टून "पिक्सेर": सर्वश्रेष्ठ सूची
उपचार र समीक्षा पछि दोस्रो cataract लेन्स प्रतिस्थापन
औषधि "Proktozan"। डाक्टर र उपभोक्ताहरु को समीक्षा।
जब बच्चा उनको टाउको पकड सुरु? हामी सिक्न!
निर्जलीकरण। लक्षण, यो तिर्खा मात्र भावना छ।
यार्न "Yarnart जीन्स": संरचना, रंग,
गलसुआशोथ संक्रमण: शरीर मा एक तीव्र प्रगति
मशरूम मशरूम: स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु र सिफारिसहरू पकाउन के
गर्भावस्था मा घाँटी उपचार
"Klinskoe कम्पाउन्ड" - संग्रहालय क्रिसमस खिलौने को। पर्यटन, फोटो, समीक्षा
चित्रकला मा Romanticism